Amarin TV သည် LiveU Fleet ကိုထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဆင့်မြှင့်တင် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲများအတွက် Amarin တီဗီအဆင့်မြှင့်မှုများ LiveU ရေယာဉ်စု
ဦးဆောင်ထိုင်းရုပ်သံဌာန Amarin တီဗီ LiveU ထိပ်တန်း-တန်း LU600 နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း LU300 HEVC နှင့်အတူရှေ့ဆက်ပြီးခဲ့သည့်လကရဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၎င်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံစွမ်းရည်အားဖြည့်သောဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများနေထိုင်ကြသည်။ အကွိမျမြားစှာယူနစ်ကင်ပိန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနှင့်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်ကိုအလိုလိုအားလုံးရှုထောင့်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်တိုင်းပြည်ပတ်ပတ်လည်ချထားခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်ထိုင်းနိုင်ငံတွင် LiveU ရဲ့ဒေသခံမိတ်ဖက်, Smart အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းကကြီးကြပ်ခဲ့သည်။
Amarin တီဗီထိုကဲ့သို့သောပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရဲ့ချင်းရိုင်ခရိုင်ရှိထိုင်းယောက်ျားလေးများဂူကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဖူးခက်ချွတ်ကူးတို့ဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်အဓိကသတင်းပုံပြင်များ, ဖုံးအုပ်, နှစ်နှစ် LiveU သုံးပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ LiveU ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ-based HEVC နည်းပညာနှင့်အတူ၎င်း၏ရေတပ်တိုးမြှင့်အထိရောက်ဆုံးလမ်းအတွက်ရရှိနိုင် bandwidth ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အမြင့်မားဆုံးသောဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်သေချာ, လာမယ့်အဆင့်ကိုရန်ထုတ်လွှင့်မယ့်တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံကြာပါသည်။
Cheewapat Nathalang, CTO, Amarin တီဗီ, LiveU ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်မိုဘိုင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ကျနော်တို့သတင်းကိုဖုံးလွှမ်းလမ်းကိုအသွင်ပြောင်းထားပါတယ် "ဟုပြောသည်။ မြောက်ကိုရီးယားအတွက်ယောက်ျားလေးများ '' ကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုစဉ်အတွင်းဥပမာ, ကျွန်တော်တစ်ဦးနှင့်အတူမဖြစ်နိုင်ပါပြီမယ်လို့ရသောဂူန်းကျင်အရပ်တို့ကိုရနိုင် ဂြိုဟ်တု ထရပ်ကား။ ကျနော်တို့စမတ်ထုတ်လွှင့်ပေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒေသခံထောက်ခံမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ newsgathering စွမ်းရည်, ထတချက်အဖြစ် LiveU ရဲ့ HEVC နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တစ်ခုသိသာရွေးချယ်မှုပါပဲ။ "
Yaal Eshel, VP အရောင်း, LiveU, ထိုင်းငါတို့အဘို့အအာရှအတွက်သော့ချက်စျေးကွက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ဦးဦးဆောင်တီဗီဘူတာရုံ Amarin တီဗီက၎င်း၏ရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံနှင့်ဖြစ်ပွားနေသော newsgathering ချဲ့ထွင်ဘို့ LiveU ရဲ့ HEVC ယူနစ်ကိုရွေးချယ်ကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါပဲ "ဟုပြောသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသက်သေအောင်မြင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ HEVC ဖြေရှင်းချက်စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးဆယ်လူလာဂီယာရွေးချယ်စရာပူဇော်ယုံကြည်ပါတယ်။ "
ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ချိန် မှစ. LiveU ထုတ်လွှင့်မျိုးစုံ fixed နေရာများမှ On-The-ပြောင်းရွှေ့သည့်နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များကိုဖမ်းယူဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်ပေး, နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ သြစတြီးယား, ခရိုအေးရှား, ဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, အိန္ဒိယ, အိုင်ယာလန်, ကင်ညာ, ရုရှား, စင်္ကာပူ, စပိန်, နယ်သာလန်, ဗြိတိန်နှင့်: နှစ်တွေ LiveU အပါအဝင်မြောက်မြားစွာနိုင်ငံတွေအတွက်ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးရွေးကောက်ပွဲ 24 /7တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံပေးထား ယူအက်စ်အေ။
ဆယ်လူလာကပ်လျက်တည်ရှိ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆယ်လူလာ Bond အထောက်အပံ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HEVC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော သတင်း က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-04-02
ယခင်: V-Nova PERSEUS ပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးရေအောက် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူ Impossible မဟုတ်